IMac Pro wuxuu bilaabaa inuu yimaado Apple Store | Waxaan ka socdaa mac
IMac Pro wuxuu bilaabaa inuu yimaado Apple Store
Javier Porcar | | iMac, Noticias, dhowr
IMac Pro wuxuu bilaabaa inuu yimaado Apple Stores aduunka oo dhan. Ka dib soo bandhigida sheyga iyo iibkiisa dukaanka internetka, hadda waa soo dhaweynta Apple Store adduunka oo dhan. Uguyaraan kiiskeyga, sikastoo ay sifiican u qeexaan sheyada aad kafekereyso inaad hesho, adoon aqoon jir ahaan way adagtahay in la qiimeeyo sida ay u dhaqmi doonaan nolol maalmeedkeena.
Sidaa darteed, had iyo jeer waa tallo, hortooda iyaga ku hay, noqo cabirro, maareyso oo samee hawl maalmeedka, sida qoridda sadar, gelinta isku xidhka ama qabashada hawl kasta oo joogto ah. Wanaagsan laga bilaabo maanta, iyo si tartiib tartiib ah maalmaha soo socda, waxaan ka eegi karnaa tan iMac Pro ee xoogga leh meesha.Laakiin maahan dhamaan dukaamada jirka Apple inay tahay waqtiga qoritaanka maqaalkan.
Si loo hubiyo, Khasab kuguma aha inaad shaqsi ahaan u tagto dukaanka Apple ee kuugu dhow, Websaydhka Apple ayaa ku siinaya macluumaadkan adigoon rogrogmin. Tani waxay u shaqeysaa iibsashada shay kasta oo ku yaal dukaanka Apple. Dhab ahaantii, Waa inaad ku iibsatid khadka tooska ah ka dibna ka soo qaad sheyga dukaanka inaad dooratay iyo inaad horay u xaqiijisay inaad haysato qodobkaan.
Xaalada iMac Pro ee Isbaanishka, waxaad si toos ah uga heli kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka kaas oo ku geynaya bogga iibsashada ee iMac Pro ee dukaanka Spain. Waad hubin kartaa sida hadda, qaybta aruurinta ee Dukaanka Apple, fariin noogu sheegeyso: Ikhtiyaarka soo qaadista ee Dukaanka Apple ayaan hadda la heli karin. Sidaa darteed, ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee xilligan la joogo waa in la iibsado si loo helo inta u dhexeysa Janaayo 10 iyo 12. Marka ay sidaas tahay, waa suurtagal in la doorto in loo diro cinwaanka aan dooneyno inaan si toos ah uga helno, adigoon sii marin Apple Store
Si kastaba ha noqotee, dukaamo badan oo adduunka ah, waa la qaabilaa hadda ama maalmaha soo socda. Marka, haddii aad dukaan ku haysato kuu dhow oo aad xiisaynayso iMac Pro, waad ku joogsan kartaa inaad weydiiso goorta ay heli doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » IMac Pro wuxuu bilaabaa inuu yimaado Apple Store
Kooxda Soy de Mac waxay kuu rajeyneysaa Sannad Wanaagsan!